बेलबारीमा दोस्रो टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता सुरु - Saptakoshionline
बेलबारीमा दोस्रो टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता सुरु
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २३, २०७६ समय: ६:३३:४९
बेलबारी, मोरङको बेलबारी वडा नम्बर २ मा रहेको कबीर निरन्तर बिकास समितीको आयोजनामा दोस्रो टोल विकास सस्था स्तरीय फुटवल प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।
बेलबारी नगरपालिका वडा नं. २का वडा अध्यक्ष घनश्याम गौतमले सो प्रतियोगिताको उदघाटन गरेका छन । साउन ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तर टोल स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा १४ वटा टिम रहेका छन । आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा ज्योति टोल विकास सस्थाले तिनेघरे टोल विकास सस्थालाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित हासिल गरेको छ ।
उक्त खेलमा ज्योति टोल विकास संस्थाका खेलाडी जर्सी नं. ७ का सुवास मगर र जर्सी नं. ११ का खेलाडी उपिन गुरुङले १/१ गोल गरेका थिए भने उक्त खेलका म्यान अफ द म्याच जर्सी नं. ७ का खेलाडी सुवास मगर भएका थिए । प्रतियोगिताको विजेता टिमले २१ हजार रुपैयाँ, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र,उपविजेताले १६ हजार रुपैयाँ, ट्र्फी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई ट्रफी प्रदान गरिने छ । वढी गोलकर्ता , सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र अनुशासित खेलाडीलाई नगद , ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिए ।